Dacwaddii Musuq maasuqa FIFA oo sii ballaaratay iyadoo dembi lagu soo oogay Xoghayihii hore ee Ururka – Gool FM
Haaruun December 1, 2016
(Bern), 01 Dis 2016 –Kooxaha Dembi baarista Waddanka Switzerland ayaa ballaariyay dacwaddii ku furnayd Xiriirka Kubadda Cagta FIFA ee la xiriirtay Laaluush qaadashadii Koobkii Adduunka 2006, waxaana markan dembi lagu soo oogay Xoghayihii hore ee xiriirka FIFA Urs Linsi.
Xeer Ilaaliyeyaasha ayaa kiiska ku soo daray Linsi oo isagu lala xiriirinayo lacagihii laaluushka ahaa ee gaarayay 6.7 Milyan oo Euros ($7 million) ee 2005 ay qaateen xubnaha FIFA si ay Jarmalka ugu fududeeyaan marti gelinta Koobkii Adduunka 2006 ee Jarmalka, waqtigaas oo uu Linsi maamulka hayay.
Linsi waxa uu Kursiga Xoghayenimada FIFA ku fadhiyay intii u dhexeysay 2002-2007.
Ragga kale ee laaluushkan qaybta ka ah waxaa ka mid ah; Franz Beckenbauer oo isagu madax u ahaa Guddigii marti gelinta K/Adduunka 2006 ee Jarmalka iyo Madixii hore ee shirkadda Qalabka Isboortiga Jarmalka ee ‘Adidas’ Robert Louis-Dreyfus, waxaana la sheegayaa in labadan mas’uul ay ku heshiiyeen in ay lacag ku bixiyaan codadkii FIFA ee lagu dooranayay marti gelinta Koobka Adduunka 2006 iyagoo hadafkoodu ahaa in Jarmalku uu martigelinta munaasabaddaasi ku guuleysto.
Arsene Wenger oo xalay safay Mohamed Elneny oo qaba SHUBAN iyo Calool xanuun